यसकारण अब वृद्धभत्ता नपाउने ! अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको यो कुरा ठिक हो ???! – Your1click
राजनिती राष्ट्रिय खबर
March 27, 2018 admin0Comments namastehost, nepal cheap web hosting
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको बिरुद्दमा उभिएका छन। जुन नाराका कारण बाम ठबन्धनले प्रष्ट बहुमत ल्याउन सफल रह्यो सांसद नबनी सिधै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले एमाले माओवादीको त्यहि नीतिको बिरुद्दमा अभिव्यक्ति दिएका छन। संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा गएका एमाले र माओवादीले मासिक दुई हजार रहेको वृद्धभत्तालाई बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।
तर घोषणापत्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका खतिवडाले अर्थमन्त्री बनेलगत्तै घोषणापत्रको बिपरित गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमै बाँडन नहुने बताएका छन। बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बजेटको मध्यावधि समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै ड़ा खतिवडाले अब सामाजिक सुरक्षा नगदमा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । खतिवडाले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका मामिलामा हामी अलि उदार भएकै हो, यसको थोर बहुत जस अपजस म पनि लिन्छु, तर अब यसलाई हामीले सुदृढीकरण र एकीकृत गर्नुपर्छ।’ उनले अगाडी भने,’सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगदमात्रै बाँडने कुरा होइन ।
यसका विभिन्न आयामहरू छन्, चाहे स्वास्थ्य विमा होस्, चाहे आवास सुविधा होस् वा सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सुविधा होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अरु प्रकारका अवसरहरू हुन् । यी सबै कुरालाई हामी सामाजिक संरक्षणका दायरामा ल्याएर । सामाजिक सुरक्षाका नाममा भएको नगद प्रवाहमात्रै हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुछ, नगदले अलि अव्यवस्थित भयो ।
← How to AddaNew Post in WordPress and Utilize all the Features
‘काँग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताको पनि सहयोग पाएको छु’ – महरा
स्याङजा निषेधित क्षेत्र घोषणा